Al Shabaab Oo Weerar Ku Burburisay Dhismaha Shirkadda Safaaricom Kenya Ee Deegaanka Katulo.
Monday January 08, 2018 - 08:21:54 in Wararka by Super Admin
Weerarada ay fulinayaan dagaalyahannada Xarakada Al Shabaab ayaa si xowlli ah uga socda gudaha wadanka Kenya gaar ahaan gobolka gumeysiga kujira ee waqooyi Bari.
Al Shabaab ayaa billaawga sanaddan 2018 waxay sedax jibaartay weerarada ay ka fulinayso Kenya taas oo caqabad hor leh ku noqday laammaha ammaanka dowladda Kenya.
Weerar hor leh ayaa lagasoo calaamadeeyay deegaan katirsan gobolka Wajeer oo maalmihii lasoo dhaafay si gaar ah bartilmaameed ugu ahaa ciidamada Al Shabaab waxaana deegaankaas lagu dilay tobaneeyo katirsan ciidamada Booliska Kenya.
Xoogaga Al Shabaab ayaa la xaqiijiyay in ay beegsadeen xarun isgaarsiineed oo dowladda Kenya laheyd taas oo kutaal deegaanka Katulo sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyo dad goob joogayaal ah.
Saraakiil u hadlay Booliska Kenya ayaa sheegay in Rag ay rumeysanyihiin in ay ka tirsanyihiin Xarakada Al shabaab ay jareen Isgaarsiintii Magaalada Katulo ee Waqooyi Bari ayna burburiyeen matoorro dab dhaliyayaal ah iyo hanti kale oo dowladda Kenya laheyd.
"Alshabaab waxay burburiyeen xaruntii shirkadda Safaricom ee Katulo balse majiraan wax dhibaata ah oo ciidanka Booliska kasoo gaartay weerarka oo runtii dhulka dhigay anteenada shirkadda" ayuu yiri taliyaha Booliska Wajeer.
Dhinaca kale war kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay Mas'uuliyadda weerarka Katulo ee lagu burburiyay xarunta shirkadda Safaricom sida ay faafisay Idaacadda Andalus.
Alshabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weeraro silsilada ah oo 10 maalmood wax ka yar ka dhacay gobolka Waqooyi Bari waxaana kamid ahaa weeraro lagu dilay 6 askari iyo mid kale oo 30 askari dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen.